Jiri nkà Poker gị na Casino - pisklak.net
Jiri nkà Poker gị na Casino
N’oge ụfọdụ, ndị na-egwu poker malitere iji nkebi ahịrịokwu dịka fauna. You nwere ike ịbụ shark na poker ma ọ bụrụ na ị nwere nkà na ya. Na-aghọ ịnyịnya ibu ma ọ bụ azụ ma ọ bụrụ na ị nweghị aka ọrụ ma ọ bụ egwu. Onye na-egwu shark shark ga-eri ịnyịnya ibu ya na azụ ya niile. Ahụtụbeghị anyị nnụnụ shark erichapụ ịnyịnya ibu na vidiyo. Mana anyị agbaghala-isiokwu.
I nwekwara ike lelee situs slot online terbaik, iji kpọọ egwuregwu n’ịntanetị.
Casino Hold’em: Kedu ihe ọ bụ?
Iji mee nke ọma na Casino Hold’em, naanị ihe ị ga-eme bụ ịghọta akara aka poker dị mkpa. Dị ka ọ dị na Texas Hold’em ọdịnala, a na-enyefe gị na kaadị abụọ nke obodo ahụ.
Na mgbakwunye, ị ga-ebu ụzọ hụ flop ahụ: kaadị atọ ndị mbụ na-eche ihu, ebe ndị na-ere ahịa na-eche ihu. Chọrọ iwulite aka kaadị poker ise ga-ekwe omume, nke kachasị mkpa, iji merie onye na-ere ahịa.
Ọ bụ n’ihi na ị maara enwere ike ịme aka mgbe enyere kaadi obodo abụọ ikpeazụ na ị nwere ike ịhọrọ ma ịgafe ma ọ bụ igwu egwu n’oge a na Texas Hold’em.
Lee ka o si dị mfe ịgba chaa chaa! Tupu ọ bụla gburugburu, ị na-eme ihe mbụ nzọ. A maara nke a dị ka ante, dị ka “ịmalite ego.” Egwuregwu okpokoro cha cha ndị ọzọ na-eme ka ị kpọọ egwuregwu dị iche iche. N’ebe a, ọ nwere ike ịbụ $ 0.10 ruo $ 100 n’otu oge. Na ma ọ bụ n’ogige atụrụ bụ nhọrọ gị mgbe ị hụrụ ka kaadị oghere gị na eriri flop na-agbago.
Iji tufuo ihu gị, mgbe emechara okirikiri, achọrọ mpịachi. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị nọ na ekwentị, ị ga-agbaji okpukpu abụọ gị na mbụ wee lee kaadị abụọ ahụ, nke a na-akpọ “ntụgharị” na “osimiri.” A kpughere kaadị abụọ ahụ n’aka ekpe na aka nri ya.
Ihe a ga-eme iji mara onye meriri
Abia n’egwuregwu poker, ajụjụ a abụghị naanị ma gị onwe gị ma ọ bụ onye na-ere ahịa nwere aka ka mma. Nwere ike ịnwe onye na-ere ahịa ahụ kụrụ ihe, agbanyeghị, ebe ọ bụ na onye na-ere ahịa ga-enwe ma ọ dịkarịa ala ụzọ anọ. Aces na twos na threes abụghị ndị a na-apụghị imeri emeri, yabụ ọbụlagodi na ị nwere naanị eze dị elu, ị nwere ike imeri onye na-ere ahịa.
Kama ịnweta naanị ụgwọ 1: 1, ịkwụ ụgwọ na egwuregwu nke blackjack bụ ihe niile mana nke ahụ. Yabụ, ọ bụrụ na ị na-aka nke a ogologo ma ọ bụ na-erughị, ị irite a 1: 1 payout. Aka kacha mma ga-emeri karịa ego.
Royal Flush 100: 1 20-to-1 straight Iwepụ anọ nke ụdị, ọbụna ego 3/1 Full House Iwepụ 2/1
Aka ndị dị adị ugbu a na-enye mmeri ka ukwuu, nke na-enye gị ohere karịa ka ị jiri nkà na ikike Texas Hold’em na ikpe gị mee nzọ dị egwu. Mgbe ị na-egwu vidiyo vidio, ka ị na-etinyekwu ihe ize ndụ, uru ndị ị ga-enweta ga-akarị. Lelee kacha mma situs oghere online terbaik, iji kpọọ online poker ma ọ bụ egwuregwu ndị ọzọ ịgba chaa chaa taa!